အခုတော့ အရောင်တွေ စွန်းလို့။
နိသာကရော ဒိပ္ပတိ အန္ဓကာရေ။
အ၀ဿုတာနံ ဟဒယော သုဖုလ္လော။
ကြယ်စင်တွေ ၀န်းလို့ ရံလို့
အမှောင်ထဲမှာ လင်းလို့ လက်လို့
အချစ်လရောင်ခြည်က နမ်းလို့ ရှိုက်လို့
တမ်းတမ်းစွဲနေသူတို့ နှလုံးသားကြာပွင့် လန်းလို့ စွင့်လို့…။
Posted by နတ္ထိ at 11:13 PM5comments
အစွန်းရောက်လမ်းကြောင်းတွေ ရှောင်ရှားလို့ မဇ္ဈိမလမ်းစဉ်အတိုင်း လျှောက်လှမ်းကြမယ့် ခြေလှမ်းတွေဟာ ငြိမ်းချမ်းရေးပန်းတိုင်ကို ရှေ့ရှုနေတယ်ဆိုရင် မှားမယ်မထင်ပါဘူး။
ဗီယက်နမ် ဇင်ဗုဒ္ဓဘာသာရဟန်းတော်Thich Nhat Hanhအကြောင်းကို မနှစ်က စသိခဲ့ရတယ်။ Engaged Buddhism in the Westစာအုပ်ကို Book reviewရေးရင်းနဲ့ သူ့အကြောင်းတစေ့တစောင်း ဖတ်ဖြစ်ခဲ့တာ။ ဒီနှစ် ဒီနေ့ ဒီနေရာမှာ သူ့ခြေလှမ်းနောက်က ထပ်ကြပ်မကွာ လိုက်ခွင့်ရလိမ့်မယ်လို့တော့ မမျှော်လင့်ခဲ့မိဘူး။
အိန္ဒိယပါလီမန်ရှေ့ကနေ အိန္ဒိယဂိတ်အထိ ရာဂျပတ်လမ်းတစ်လျှောက် ငြိမ်သက်ငြိမ်းအေးစွာ လျှောက်လှမ်းခဲ့ကြတဲ့ ခြေလှမ်းများကို Thich Nhat Hanhက ဒီလို ရှုမြင်တယ်…
It is trulyamiracle to walk on this earth. As you breathe in and out you can remind yourself: “Every step isamiracle.”
Afterawhile you will begin to feel that you have more than enough conditions for happiness right now. You will see how happy you are to be able to walk, to be able to see the blue sky and hear the song of the birds and you can remind yourself: “Every step is happiness.”
If you have any suffering in your body or mind you will discover that walking peacefully like this has the power of healing and you can remind yourself: “Every step is healing.”
Gradually your mental states and physiological state begin to transform, becoming more and more positive and you can remind yourself: “Every step is transforming.”
မဟတ္တမဂန္ဒီရဲ့ မွေးနေ့မှာ လျှောက်လှမ်းခဲ့တဲ့ လမ်းခရီးအတွက်ကိုလည်း သူက ဒီလို ဆိုပါတယ်…
Today we shall enjoy walking asacontinuation of the Mahatma and if we succeed today we shall walk as his continuation every day.
Dalia Lamaက သူနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဒီလို မိန့်မြွက်ခဲ့ဘူးတယ်..
Thich Nhah Hanh shows us the connection between personal inner peace, and peace on earth.
Posted by နတ္ထိ at 10:07 PM 1 comments
Labels: ကူးယူဖော်ပြချက်, ခရီးသွား, အမှတ်တရ
၂၀၀၇ နှစ်ဆန်းပိုင်းတုန်းက ရာဇဂြိုလ်နဲ့ သာဝတ္ထိကို သွားဖြစ်တယ်။ အဲဒီကို ရောက်တော့ ဖတ်ထားမှတ်ထားသမျှ ပါဠိစာပေတွေထဲက သတိရမိတဲ့ အကြောင်းတွေ အများကြီး။ ပါဠိစာပေသင်ခါစက ရေးထားတဲ့ ကဗျာတွေထဲက တစ်ပုဒ်ကိုတော့ မှတ်မှတ်ရရ သတိရမိတယ်။ ဒေ၀ဒတ်အကြောင်းပါ။ ဇတ်လမ်းကတော့ အားလုံး သိပြီးသားပါပဲ။
၀သုဓာ ၀ိဝဋာ အတ္တ-၀ဓာယ ဒေ၀ဒတ္တ တေ။
မဟာကရုဏာတော်ဝတ်ရုံ ဆင်မြန်းထားသော မြတ်ဗုဒ္ဓကိုမှ
အသေသတ်ဖို့ ကြိုးစားသည့် အို…ဒေ၀ဒတ်
ဒီလို စင်္ကြာဂါထာလေးတွေကို အမြဲတမ်း မရေးဖြစ်ဘူး။ တကယ့်ကို အကြောင်းညီညွတ်မှ။ ဒီဂါထာလေးကို ရေးဖြစ်တဲ့ အဓိကအကြောင်းကတော့ ပါဠိစာလုံးလေး တစ်လုံးကို တွေ့မိလို့ပါ။ “အတ္တ၀ဓ”တဲ့။ အတ္တ=မိမိကိုယ်။ ၀ဓ=သတ်ခြင်း။ Pali Test Society ပါဠိအဘိဓာန်က self-destructionလို့ ဖွင့်တယ်။
၀ဓမှာ “၀”အက္ခရတစ်လုံးပါတယ်။ ဒီတော့ ဒီအက္ခရာကို အသုံးပြုပြီး ဒီဂါထာလေးကို စပြီး ပုံဖော်ရတယ်။ ကိုယ်ရေးချင်တဲ့ အကြောင်းမှာ ပါတဲ့ သူကလဲ ဒေ၀ဒတ္တ။ ဒီမှာလဲ “၀”အက္ခရာတစ်လုံးပါပြန်ရော။ နည်းနည်း ရုပ်လုံးပေါ်လာတာပေါ့။ ပြီးတော့ ၀ဓတ္ထိက=သတ်ဖြတ်ဖို့ လိုလားသူ။ “၀” ၃လုံး ရှိသွားရော။ ပြီးတော့ ၀သုဓာ=မြေပြင်။ ၀ိဝဋာ=ဟင်းလင်းပွင့်။ “၀” ၅လုံး ဖြစ်သွားပြီ။ ဒါတွေက ဒေ၀ဒတ်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အက္ခရာတွေ။
မြတ်ဗုဒ္ဓနဲ့ ဆိုင်တဲ့ စကားရပ်ကတော့ တစ်ခုထဲ။ ၀ရာနုဘာဝသဉ္ဇာတ၀မ္မီ=ထူးမြတ်သော အာနုဘော်ကြောင့်ဖြစ်သော ချပ်ဝတ်တန်ဆာရှိသူ။ ဒါက တိုက်ရိုက် ဘာသာပြန်တာ။ “မဟာကရုဏာတော်ဝတ်ရုံနဲ့ မြတ်ဗုဒ္ဓ”ကတော့ ဆိုလိုချင်တဲ့ အဓိပ္ပါယ်ပါ။ ဒီဝေါဟာရမှာ “၀”အက္ခရာ ၃လုံးပါတယ်။
ဒီတော့ အားလုံးပေါင်း “၀” ၈လုံး။ ဒီဂါထာ ဖွဲ့စပ်နည်းအရ “၀” ၈လုံး ပါကိုပါရမယ်။ သူ့နေရာနဲ့သူ ထားရတယ်။ ဒီလို ဇတ်လမ်းနဲ့ သက်ဆိုင်ရာ အက္ခရာတွေကို စုစည်းပြီး ဒီိလို စင်္ကြာဂါထာလေးတွေ ရေးဖြစ်ခဲ့တာပါပဲ။ အခုတော့ မရေးဖြစ်တာ ကြာနေပြီ။ အင်း...အက္ခရာတွေလဲ ပထ၀ီဝင်ဖြစ်ကုန်ပြီလားမသိ။
Posted by နတ္ထိ at 9:15 AM0comments
Labels: စင်္ကြာဂါထာ, စာတိုပေစ